Nepali Christian Bible Study Resources - रोमी १६:१-६
» अध्ययन मालाहरू » रोमीको टिप्पणी » रोमी अध्याय १६ » रोमी १६:१-६
उनीहरू स्थानीय मण्डलीमुखी थिए। १ कोरिन्थी १६:१९ र रोमी १६:५ - यी दुवै खण्डहरूले तिनीहरूको घरमा (रोम रएफेसस दुवैमा) भएको मण्डलीको बारेमा बताएको छ। तिनीहरूको घर विश्वासीहरूकोलागि भेला हुने ठाउँ थियो - उपासना गर्ने, गाउने, प्रचार गर्ने, सङ्गतिगर्ने, प्रार्थना गर्ने, र रोटी भाँच्ने स्थान थियो।
उनीहरूको परमेश्वरबाट दान पाएको व्यक्तिसित ठीक सम्बन्ध थियो। रोमी १६:३ - यस पदमा तिनीहरूलाई पावलका "सहकर्मीहरू" भनी जनाइएको छ। जबअक्विला र प्रिस्किल्ला पावलको विचारमा आउँथ्यो, उसले भन्न सक्थ्यो, "यीप्रिय विश्वासीहरू मेरा सहयोगीहरू हुन्, मेरा सहकर्मीहरू हुन्।" के तपाईंकोपाष्टरले तपाईंको बारेमा यस्तै भन्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरबाट दान-प्राप्तव्यक्तिसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ (तुलना गर्नुहोस् एफेसी४:११)? तपाईं आफ्नो पाष्टरको सहयोगी हुनुहुन्छ कि बाधक हुनुहुन्छ? तपाईंउहाँसँगै मिलेर काम गर्दैहुनुहुन्छ कि उहाँको विरूद्धमा? के उहाँलेतपाईंलाई फाइदाजनक देख्नुहुन्छ कि हानिकारक? पावलले निश्चय नै यीपति-पत्नीको टोलीलाई उनको सेवकाइ र ख्रीष्टको सेवामा ठूलो फाइदाकोरूपमा देख्ने गरेका थिए।
उनीहरू साहसी थिए। रोमी १६:४ - स्पष्ट रूपमा पावलको जीवन यी साहसी पति-पत्नीप्रतिऋणी थियो। हामीलाई विस्तृत रूपमा बताइएको त छैन, तर तिनीहरूले कुनै न कुनैकिसिमले आफ्नो जीवनलाई पावलको निम्ति जोखिम र सङ्कटमा पारेको हुनुपर्छ।तिनीहरूले पावलको ज्यान जोगाउनको लागि आफ्नै गर्दन दिएका थिए, रपरिणामस्वरूप पावल र अन्यजातिहरूका सबै मण्डलीहरू तिनीहरूप्रति धन्यवादकोऋणी थिए। पावल परमेश्वरबाट अन्यजातिहरूका लागि एक विशेष प्रेरित थिए, र यदिप्रिस्किल्ला र अक्विला बीचमा नआएका भए, पावलको मृत्यु भइसकेको हुन्थ्यो रअन्यजातिहरूप्रति उनको सेवकाइ अप्रत्याशित रूपमा अन्त हुन जान्थ्यो।प्रिस्किल्ला र अक्विलाले पावललाई आत्मामा १ यूहन्ना ३:१६ अनुसार साँचोप्रेम प्रकट गरे। पावलले जे-जस्तो घटनालाई सङ्केत गरको भए तापनि, यो सम्भव छकि रोमी १६:३ मा प्रिस्किल्लाको नाम पहिला उल्लेख गरिएको तथ्यलाई प्रकाशमापार्दा उनकै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनुपर्छ। यसले हामीलाई अर्कोबुँदातर्फ लैजान्छ।
उनीहरू अन्तसम्मै विश्वासयोग्य र स्थिर थिए। २ तिमोथी ४:१९ - यो पत्र पावलको अक्विला र प्रिस्का (प्रिस्किल्ला) सँगभएको पहिलो भेटको १४ बर्ष पछि लेखिएको अन्तिम पत्र थियो। तिनीहरूविश्वासयोग्य विश्वासीहरू थिए। यी दुई विश्वासीहरूको बारेमा पावल वा लूकाकोकुनै पनि पत्रहरूमा नकारात्मक रूपमा भनिएको छैन। अभिलेखहरूले देखाएअनुसार, पावल र अक्विला/प्रिस्किल्लाबीच सधैं एक मन थियो। पावलले कहिले पनितिनीहरूलाई डेमासलाई भन्नु परे झैं भन्नु परेन (२ तिमोथी ४:१०)। तपाईंकोबारेमा नि? आजको १४ बर्ष पछि तपाईंको आत्मिक अवस्था कस्तो होला? हामीलेहाम्रो पहिलो प्रेमलाई नत्यागौं र हामीले हाम्रो मुक्तिको आनन्दलाई कहिल्यैनगुमाऊँ।
पावलले अक्विला र प्रिस्किल्लाको घरमा भएको मण्डलीलाईअभिवादन पठाए। यहाँ हामीलाई “घरेलु मण्डली"भन्ने रोचक विषयमा सोच्न कर लाग्छ। पहिलो शताब्दीमा हिजोआजका जस्ता मण्डली भवनहरू थिएनन्। विश्वासीहरू जहाँ सक्थे त्यहीँ जुट्थे—घरहरूमा, चउरहरूमा (प्रेरित १६:१३ जहाँ यहूदीहरू नदीको किनारमा भेला भएको देखिन्छ), सुरुङ्गहरूमा इत्यादी। उनीहरूसित ख्रीष्टको यो प्रतिज्ञा थियो, “किनकि जहाँ दुई वा तीनजना मेरो नाममा भेला हुन्छन्, त्यहाँ तिनीहरूका माझमा म हुन्छु” (मत्ती १८:२०)। यातायातको सुविधा पनि आजको जस्तो सजिलो थिएन। आज हामी कुनैठूलो शहरको एक छेऊदेखि अर्को छेऊमासजिलैपुग्न सक्छौं, तर प्राय:जसो पैदलै यात्र गर्नुपर्ने पहिलो शताब्दीको समयमा, त्यसो गर्नु खासै सजिलो हुनेथिएन।
विश्वासीहरू विभिन्न स्थानहरूमा जुट्ने गरेको भए तापनि, यो कुरा ध्यानमा राख्नु खाँचो छ कि, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा, हरेक प्रमुख शहरमा एउटा स्थानीय मण्डली हुन्छ। त्यसैले रोमको शहरमा थुप्रै मण्डलीहरू थिएनन्; त्यहाँ एउटा मण्डली थियो। हरेक शहरमा एउटै मात्र मण्डली हुने गर्थ्यो। उदाहरणको निम्ति, १ कोरिन्थी १:२ मा हामीले "कोरिन्थमा भएको परमेश्वरको मण्डली (एकवचन)” भनेर पढ्दछौं। एफेसस निकै ठूलो शहर थियो तर त्यहाँ पनि केवल एउटा मण्डली थियो, यद्यपि त्यस शहरमा थोरैमा पनि एउटा “घरेलुमण्डली” थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाह छ (१ कोरिन्थी १६:१९)। तरैपनि यदि हामीलाई कोरिन्थीका विश्वासीहरू विभिन्न घरहरूमा भेट्नेगर्थे भनी हामीले मानिलिए तापनि, यस्तो समयहरू पनि थियो जब “सारा मण्डली” “एक ठाउँमा भेला” हुने गर्दथ्यो (१ कोरिन्थी १४:२३ र ११:२० हेर्नुहोस्)।
« रोमी १५:१७-३३
रोमी १६:७-१५ »